Budata PDF Encrypt maka Windows
Budata PDF Encrypt
Free Budata maka Windows (5.34 MB)
Budata PDF Encrypt,
Ihe omume PDF Encrypt bụ otu nime mmemme enwere ike iji rụọ ọrụ iji chebe faịlụ PDF gị. Ọ na-akwado 40-bit RC4, 128-bit RC4, 128-bit AES na 256-bit AES ogbugba ndu, yabụ ị nwere ike ichekwa faịlụ PDF gị site na iji usoro ngbanwe ịchọrọ.
Ekele maka nchedo PDF, ị nwere ike igbochi ndị ọzọ na-anata akwụkwọ gị site na ibipụta, i copomi na ịme ọtụtụ ihe. Yabụ, ọbụlagodi na enwetara akwụkwọ gị na-enweghị ikike, ọ nweghị usoro ọzọ enwere ike ịme karịa ịgụ ha. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwekwara ike itinye paswọọdụ na dọkụmentị gị, wee si otú a hụ na enweghị ike ịgụ ya nụzọ ọ bụla belụsọ na achọtara paswọọdụ.
Akwụkwọ gị ga-adị mma mgbe niile maka mmemme ahụ nke na-adịghị awụnye ọkwọ ụgbọala ọ bụla ma dọrọ na dobe nkwado na nkwado nhazi ogbe.
PDF Encrypt Ụdịdị
Nha faịlụ: 5.34 MB
Mmepụta: PDFArea Software